Akụkụ 3 nke Usoro Ntanetị Email Ziri Ezi | Martech Zone
Tuesday, January 26, 2016 Wednesday, February 10, 2016 Douglas Karr
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-elekwasị anya na atụmatụ ha maka ire ahịa email naanị na nrụpụta ọrụ yana arụmọrụ nke email. Nke a na-atụ uche ụfọdụ nnukwu akụkụ na-emetụta ọfụma ụlọ ọrụ gị na-asọ mpi megide igbe mbata nke juru elu maka nlebara ndị debanyere aha gị.
Enwere akụkụ 3 maka nyocha ọ bụla emere mgbe emechara ozi ịre ahịa email:
Nyefee Email - nke a bụ ma email gị mere ya na igbe mbata. Nke ahụ bụ ngwakọta nke ịdị ọcha nke ndepụta email gị, aha nke adreesị IP izipu gị, ndaba nke onye na-eweta ọrụ email gị (ESP), na mgbakwunye na ọdịnaya ị na-ewepụ. N'okpuru ala - ole n'ime ozi ịntanetị gị mere ya na igbe mbata, na-ezere folda junk ma ọ bụ bounced. Ọtụtụ ndị folks adịghị echegbu onwe ha banyere nke a, ọkachasị ndị na-enweghị ezigbo ESP. Agbanyeghị, ịnapụta mmadụ nwere ike mebi mmekọrịta gị na ego gị. Anyị na-eji 250ok na lelee igbe ntinye anyị.
Omume I debanyere aha - ndị a bụ ndị nnata, ma ọ bụ ndị debanyere aha, nke email gị. Hà mepere? Pịa-ma ọ bụ Pịa-Site Ọnụego (CTR)? Mgbanwe? Ndị a na-Elezie tụrụ dị ka "pụrụ iche" na-atụle. Nke ahụ bụ, ọnụ ọgụgụ ahụ bụ nke ndị debanyere aha ndị meghere, pịa, ma ọ bụ gbanwee… ka a ghara ihie ụzọ na ọnụ ọgụgụ mepere emepe, pịa, na ntụgharị. Akụkụ dị mma nke ndepụta gị nwere ike ghara ịnọ ọdụ - gịnị ka ị na-eme iji soro ha mekọrịta ọzọ?
Ọrụ Afọ Email - nke a bụ otú ọdịnaya gị mere. Kedu ihe ndị mepere emepe, pịa, na mgbanwe? Kedu ka njikọ gị jikọtara? You na-ekewa ọdịnaya gị ka o kwekọọ na onye debanyere aha? Emeputara ihe di omimi, nkewa nkewa, na imezigharị onwe ya na emeziwanye ogo arụmọrụ email.
Ka ị na-aga n’ihu, ị kwesịrị ị na-atụnyere ọrụ mkpọsa gị n’ofe akụkụ ndị a n’ofe mkpọsa ọ bụla na ndepụta ọ bụla ma ọ bụ nkewa. Ọ ga - enye gị ohere ịme ngwa ngwa ebe nsogbu gị dị!
Tags: edozi atụmatụ emailnhazi usoroakụkụemail Marketingatụmatụ ịzụ ahịa email